Project Management နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ sub-forum တစ်ခု လိုအပ်နေခြင်း [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > FAQ & Request Zone > အကြံပေးရန် > Project Management နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ sub-forum တစ်ခု လိုအပ်နေခြင်း
View Full Version : Project Management နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ sub-forum တစ်ခု လိုအပ်နေခြင်း
ကျွန်တော်က မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ forum ကို အခုမှ စသုံးဖူးတာပါ။
ဒီဖိုရမ်မှာ သတိထားမိတာက Project Management နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေ မတွေ့ရဘူး။
အင်ဂျင်နီယာတွေ အာလုံးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ဆွေးနွေးမှုမျိုးတွေ ရှိတဲ့ နေရာမျိုးလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Project management ဟာ Engineering or IT project တွေအတွက် efficiency ရဖို့ အတွက် အဓိကကျတဲ့ အခန်းမှာ ရှိသလို မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေ အတွက် လည်း မရှိမဖြစ် သိသင့် ဆွေးနွေးသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ အကြံပြုလိုက်ပါရစေ။
ဘာအလုပ်ဘဲ လုပ်2 management ကအလုပ်အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိက လိုအပ်ချက်ဘဲ ၊ အသေးဖွဲကစ လို့အားလုံး လုပ်ဆောင်မဲ့လူရဲ. management အ၇ အောင်မြင်မှု အတိုင်းတာ ရလဒ်လည်းမတူညီနိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့် management ကိုစာတွေ.ဘဲဖြစ်2 ၊ လုပ်ငန်း အတွေ.ကြုံ ကြောင်.ဘဲဖြစ်2 MEF မှ member အားလုံးကို ၀င်ပြီးဆွေးနွေးပေးဖို. ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Project Management ကို စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/board,256.0.html) အောက်မှာ ထည့်ရင် ရမယ်ထင်တယ် ။
ကျွန်တော်လဲ သေချာမပြောတတ်ဘူး ။ အကြံပေးကျပါအုံး ။
MANAGEMENT is one of major functions in order to have the efficiency of the project. If we assume project as human body, management will be skeleton of the project. Firstly I would like to introduce what is project management. Basically, the following figure represents Project Management.
However, due to the wide range of project management, it is necessary to understand which management we do need to pay attention before we start going. The following link can support to comprehend different kinds of management. http://www.bettermanagement.com/ By SWOT analysis http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis, we can identify what is crucial to manage for long-term achievement. Again upgrading management is required to prevent system failure.
ညီလေး ရာမည ပြောတာ မှန်ပါတယ် ...
တကယ်တော့ Project Management ဆိုတာလဲ Management subject တခုပဲမို့ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ အောက်မှာပဲ ထည့်ရပါမယ်
ဒါဆိုရင် Project Management ဆိုတဲ့ Sub-title ကို စီမံအောက်မှာ အတည်ပြုလိုက်ကြရအောင်...
ဟုတ်ကဲ့ .. အခုလိုအကြံပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
ကျွန်တော် Management Section အောက်မှာ Sub-forum အနေနဲ့ Project Management ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖွင့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ..
Project Management နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ တင်ပေးချင်ပါတယ် ဘယ်လိုတင်ရမလဲ ကူညီပါ၊ အင်ဂျင်နီယာတွေအဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ကို Hein Naing ရေ..
http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,5094.0.html အောက်မှာ တင်ပေးပါလားခင်ဗျား..
အရင်တုန်းကတော့ MEF ဒေါင်းလုတ်စင်တာ သပ်သပ်ရှိပါတယ်.. အခုတော့ ကို Hein Naing အဆင်ပြေတဲ့ uploading တစ်ခုခုနဲ့တင်ပေးလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျား..
တကယ်လို့free hosting ကနေ တင်ရတယ်ဆိုရင်တော့ ဖိုရမ်မှာ အကောင့်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ကို ထပ်ဆင့်တင်ပေးဖို့ပိုစ့်မှာ တစ်ခါတည်း တောင်းဆိုလို့ ရပါတယ်..
upload တင်ပုံ တင်နည်းတွေကိုတော့
ဒီနေရာ (http://www.myanmarengineer.org/forum/index.php/topic,1324.0.html) တွေမှာ